Politikan’ny GEFP : tsena tokony hotrandrahana any Azia | NewsMada
Politikan’ny GEFP : tsena tokony hotrandrahana any Azia
Nitondra fanazavana teo anivon’ny minisiteran’ny Fitantanambola sy ny tetibola (Fenitra, laharana faha-9) ny filohan’ny GEFP (Groupement des entreprises franches et partenaires), Razafimandimby Eva, nanamarina fa mampidi-bola betsaka amin’ny kitapombolam-panjakana ny sehatra tsy miankina. Ara-dalàna izao ny orinasa afakaba, rehefa tafaverina amin’ny AGOA, tsena amerikanina. AGOA, mamela hanondrana entana tsy voafetra ary tsy mandoa haban-tseranana miditra any Etazonia.
Azo lazaina ho miarin-doha ny orinasa afakaba. Ny volana septambra 2016, tratra sahady ny fenitra tokony hotratrarina ny taona 2016 manontolo. Teo koa ny fandraisana ilay “Salon Origin Africa”, andiany voalohany, natao teto an-toerana. Anisan’ny tsena mbola tokony hotrandrahana ny any Azia Atsimo Atsinanana, ohatra, i Hong-Kong, i Chine. Hahafahana miatrika izany ny fisian’ny tetikasa “Textile city”. Misy ny fahaiza-manao takin’ireny firenena ireny. Noho izany, ilaina ny fananganana ny sekoly fanofanana manara-penitra ho an’izany sehatra izany. “Tsy mahazaka velively ny firenentsika eo amin’ny fifaninanana, raha ny zava-misy ankehitriny ”, raha ny fahitan’ny filohan’ny GEFP azy.
Fepetra takin’ny GEFP
Betsaka ny fepetra takina ho an’ny mpiasa hahazoany tombontsoa sy hampandroso ny orinasa. Ny mpiasa aloha, tsy maintsy mihoatra ny 18 taona. Tsy maintsy tratrarina ihany koa ny karama farany ambany eto Madagasikara ary tokony handray karama arakaraky ny mari-pahaizana sy ny traikefa ananany ny mpiasa iray. Mitovy amin’ny asam-panjakana ny fepetra takin’ny GEFP momba ny fampisondrotana karama isan-taona. 172. 000 Ar ankehitriny ny karama farany ambany ; takina ihany koa ny ora ambony ampanga sy ny fampidirana azy ireo amin’ny fiantohana ara-tsosialy. Firy amin’ny orinasa tsy miankina ny manaja izany ary hatraiza ny fanaraha-maso fampiharana ny lalàna ataon’ny fanjakana ?
Momba ny fandaharanasa taona 2017, hifototra kokoa amin’ny fanomezan-danja ny fampivoarana ny maha olona ny GEFP. Omen-danja manokana ny fanofanana momba ny asa sy ny andraikitra ao amin’ny orinasa.